ओमिक्रोनको बारेमा लगातार चेतावनी दिएको ‘डब्ल्यूएचओ’ ले पहिलो पटक किन यस्तो भन्यो ? – List Khabar
Home / समाचार / ओमिक्रोनको बारेमा लगातार चेतावनी दिएको ‘डब्ल्यूएचओ’ ले पहिलो पटक किन यस्तो भन्यो ?
admin December 4, 2021 समाचार Leaveacomment 50 Views
विश्वका लागि खतराको घडी बनेको कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनबारे विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले केहि राम्रो खबर दिएको छ । डब्ल्यूएचओले स्वीकार गर्‍यो कि केही देशहरूले सिमाना (यात्रा प्रतिबन्ध) सिल गरेर यसको विरुद्धको तयारीलाई थप समय दिन सक्छ। भारतलगायत विश्वका करिब तीन दर्जन देशहरूमा ओमिक्रोन भेरियन्टका केसहरू रिपोर्ट गरिदिएका छन्। उही समयमा यी देशहरूको तुलनामा दक्षिण अफ्रिकामा कोरोनाका केसहरू तीब्र गतिमा बढिरहेका छन् र नयाँ संस्करण त्यहाँ बलियो हुन सक्छ।
ओमिक्रोनको बारेमा अहिलेसम्म धेरै स्पष्ट छैन। जस्तै कि यो अधिक संक्रामक छ, के यसले मानिसहरूलाई गम्भीर रूपमा बिरामी बनाउँछ वा खोपद्वारा प्रदान गरिएको सुरक्षालाई बाइपास गर्न सक्छ। वा कुनै पनि खोप यसको विरुद्ध प्रभावकारी हुनेछैन।
पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रका लागि डब्ल्यूएचओका क्षेत्रीय निर्देशक ताकेशी कासाईले शुक्रबार फिलिपिन्सबाट एक अनलाइन सम्मेलनमा भने, “सीमामा रहेको पाम्बान्डीले भाइरसको प्रवेशमा ढिलाइ गर्न सक्छ र यसलाई तयारी गर्न समय दिन सक्छ।” तर प्रत्येक देश र प्रत्येक समुदाय मामिलाहरूमा नयाँ वृद्धिको लागि तयार हुनुपर्छ।
“यी सबैको राम्रो समाचार यो हो कि हामीसँग ओमिक्रोनको बारेमा कुनै जानकारी छैन जसले हाम्रो प्रतिक्रियाको दिशा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ भनेर सुझाव दिन्छ,” उनले भने। डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय आपतकालीन निर्देशक डा. ओलोभोकुरेले भने कि यसको मतलब खोप बढाउन जोड दिन, सामाजिक दूरीका नियमहरू पालना गर्न र मास्क लगाउने लगायतका अन्य उपायहरू जारी राख्न आवश्यक छ।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य प्रणालीले बिरामीको सही समयमा सही ठाउँमा उपचार हुन्छ र आवश्यकतामा परेका बिरामीका लागि आईसीयू बेड तयार राख्नुपर्छ।’ कासाईले भने कि ओमिक्रोनलाई उत्परिवर्तनको संख्याको कारणले चिन्ताको एक प्रकार तोकिएको छ र प्रारम्भिक जानकारीले यो भाइरसको अन्य प्रकारहरू भन्दा बढी संक्रामक हुन सक्छ। उनले थप अनुसन्धान र अवलोकन आवश्यक रहेको बताए ।
ओलोओकुरेले भने कि हालसम्म पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रका चार देश र क्षेत्रहरू – अष्ट्रेलिया, हङकङ, जापान र दक्षिण कोरियामा ओमिक्रोन भेरियन्टका घटनाहरू रिपोर्ट गरिएको छ। “देशहरूले अहिले के गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा वर्षौंदेखिको हाम्रो अनुभवले, विशेष गरी डेल्टा भेरियन्टको प्रतिक्रियामा, हामीलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दछ, साथै भविष्यमा कसरी मामिलाहरू छन्,” उनले भने। हुर्कनु भन्दा दिगो तरीकाले सामना गर्न।’
ओमिक्रोन संस्करणले लगभग दुई महिना पछि बेइजिङ शीतकालीन ओलम्पिक खेलहरूको लागि चिन्ता बढाएको छ। आयोजक समितिका प्रवक्ता झाओ वेइडोङले शुक्रबार बेइजिङले खेलकुदको समयमा भाइरस फैलिने जोखिमलाई कम गर्न विभिन्न उपायहरू अपनाइरहेको बताए।
Previous बालाजुको एक गेस्ट हाउसमा २ करोडमा हुदै थियो कारोबार, प्रहरी पुगेपछि…
Next भिडभाड बाटोमा नाच्दै टिकटक बनाउँदै गरेकी यी युवतीलाई पर्यो यस्तो फसाद (भिडियो सहित)